Samsung Version 4.3 ဖုန်းတွေအတွက် စမ်ဆောင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကီးဘုတ်လေးကို ထည့်သွင်းနိူင်ပါပြီ ~ Free Mobile Sharing
1:41 AM Android Apps, Android Tutorials, Firmwares For Android, သတင်း, သိမှတ်ဖွယ် 47 comments
Samsung ရဲ့ Version 4.3 ဖုန်းတွေအတွက်
( စမ်ဆောင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကီးဘုတ်လေးကို ထည့်သွင်းနိူင်ပါပြီ )
လိုအပ်သည့်ဆော့ဝဲများကို အောက်မှာဒေါင်းယူပါ ။
Root Explorer Pro ဆော့ဝဲကို ဒီမှာနှိပ်၍ဒေါင်းပါ
သွားထည့်ရမည့် my_ZW ဇစ်ဖိုင်ကို ဒီမှာနှိပ်၍ဒေါင်းပါ
Root လုပ်ထားသောဖုန်းများ Root Explorer ဆော့ဝဲထဲသို့သွားပြီး
ဒေါင်း၍ရလာသော my_ZW ဇစ်ဖိုင်လေးကို အဲ့ဇစ်အတိုင်း System >>> sipdb အထဲကိုသွားထည့်ပေးလိုက်ပါ
( အပေါ်နားက R/W ဆိုတဲ့စာလေးကို R/O လို့ပြောင်းပြီးမှချပါ )
ပြီးရင် ထို my_MM ဇစ်ဖိုင်လေးအား rw - r - r ပေးပြီး ဖုန်းကိုရီစတတ်ချပေးလိုက်ပါ ပြီးပါပြီ :)
rw - r - r ပေးနည်းမသိပါက ဒီမှာသွားကြည့်ပါ http://freemobilesharing.blogspot.com/2013/12/root-explorer-permissions.html
ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ ရသွားပါပြီ ။
Galaxy Note3မှာ စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် :)
ကျနော့်တို့မှာ ဖုန်းအစုံမရှိတဲ့အတွက် ဖုန်းတိုင်းရမယ်လို့တပ်အပ်မပြောနိူင်ပါဘူး ။
Note3Version 4.3 ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ် ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေသွားကြတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်နဲ့ Version ဘယ်လောက်ဆိုတာလေးကို အတိအကြ ကွန်မန့်ထားပေးခဲ့ကြပါ :)
Galaxy Note3Version 4.3
Galaxy Note2Version 4.3
Galaxy S3 Version 4.3
Galaxy Tab2"7.0" GT-P3100 Version 4.2.2
kyaw thiha November 7, 2013 at 2:26 AM
note2မှာစာရေးလို့ရတယ် အက္ခရာမပေါ်ဘူး
kyaw thiha November 7, 2013 at 2:28 AM
ညမီးအိမ် November 7, 2013 at 2:47 AM
S4 GT-I9505 4.2 မှာ​တော့ Select input Languages ထဲမှာ Myanmar ( Zawgyi ) ​ရွေးပြီး စာရိုက်​မယ်​ဆိုရင်​ မြန်​မာ မ​ပေါ်ပဲ eng ပဲ​ပေါ်တယ်​
jack November 7, 2013 at 3:19 AM
Djjoe man November 7, 2013 at 3:27 AM
အကို ညမီးအိမ်ဖုန်းမှာ မြန်မာစာအော်ဒီဂျင်နယ်ပါပြီးသားဆိုရင်ရင် စမ်ဆောင်းရဲ့ မြန်မာစာစနစ်နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ပါဝင်ပြီးသားပါ စမ်ဆောင်းကဖျောက်ထားတာပါ ။
ပြန်ဖော်နည်းကို ဒီလင့်မှာလေ့လာပြီးလုပ်လိုက်ပါ http://freemobilesharing.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
ညမီးအိမ် November 8, 2013 at 7:30 PM
ဟုတ် ကို DJ ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ မြန်မာစာစနစ်နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်အစ်ကို ဒါပေမယ့် မြန်မာစာကီးဘုတ်မပေါ်ဘူး ကျွန်တော် firmware က Irenland (TSI) မို့လို့လားမသိဘူး update လုပ်ကြည့်လဲ မြန်မာစာကီးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့မပေါ်ဘူး အစ်ကိုအခုပေးတဲ့ဖိုင်ထည့်လိုက်မှ Select input Languages ထဲမှာ Myanmar ( Zawgyi ) ပေါ်လာတာ ဒါပေမယ့် samsung keyboard ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ မြန်မာစာမပေါ်ဘူးအစ်ကို ဒါနဲ့ စကားမစပ် အစ်ကို့ကို ကျွန်တော် facebook မှာ add ထားတာလေး လက်ခံပေးပါဦး :)
Djjoe man November 8, 2013 at 9:34 PM
ညမီးအိမ် November 8, 2013 at 9:42 PM
အဲ့လိုလုပ်ပြီးသားကိုမရတာပါအစ်ကို ကျွန်တော့်အထင် version 4.2 ကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်
Djjoe man November 8, 2013 at 10:12 PM
ဖုန်းမှာရော မြန်မာဖောင့်ရှိရဲ့လား ထည့်ထားလားအကို ။ မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်ယုံနဲ့ မြန်မာစာရိုက်လို့မရပါဘူးအကို ဖုန်းမှာမြန်မာဖောင့်ရှိရပါမယ်
ညမီးအိမ် November 8, 2013 at 10:18 PM
ဖုန်းက ဖောင့်လဲထည့်ထားတယ် root လဲလုပ်ထားတယ် အစ်ကို သူက မြန်မာ ကီးဘုတ်ကိုပေါ်မလာတာပါ screen shot ရိုက်ပြရမလားအစ်ကို
Aung Thu November 13, 2013 at 4:29 AM
ကို DJ ကျွန်တော့် Note 10.1 (2014 edition), SM P605, Android 4.3 မှာ မြန်မာစာ လုံးဝမပါပါဘူ။ ဒါနဲ့ Root လုပ်ပြီး ZawgyiOne.ttf ကို DroidSansFallback.ttf နဲ့ လဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chrome Browser နဲ့ Gmail App ရဲ့email body မှာပဲ မြန်မာစာ မြင်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ မြန်မာစာ မမြင်ရပါဘူး။ ဖောင့်သွင်းတဲ့ ဆော့ဝဲတွေလဲ စမ်းတာ ကုန်နေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါ။ aungthummu@gmail.com
Area-41 November 14, 2013 at 12:20 PM
အဆင်ပြေပါ၏ .... S3 i9300 android 4.3 (region SWC)
SM N9005 ရောရလား
Djjoe man November 15, 2013 at 5:40 PM
SM N9005 အတွက် ဒီဖောင့်လေးကို အင်စတောလုပ်ပေးလိုက်ပါ ။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ဇစ်ဖိုင်လေးကို ကွန်ပြူတာမှာဖြေလိုက်ပါ ပြီးရင်ဖုန်းကိုကြိုးချိတ်ပြီး ဖိုဒါလေးထဲက bat ဖိုင်လေးကို Run ပေးလိုက်ပါ ( Root ) ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ပြီး၇င် ရသွားပါပြီ ။
စမ်ဆောင်းကဖျောက်ထားတဲ့ ဖုန်းတစ်ခုလုံးမြန်မာစာစနစ်ပါပေါ်လာပါမယ် ။ မြန်မာစာကီးဘုတ်လဲပေါ်နေပါပြီ ။
Android 4.3 တွေမှာ မြန်မာစာလွဲနေတာတွေကိုလဲ ပြင်ပေးထားပါတယ်
Smartzawgyi ကို Android 4.3 အတွက် ပြန်လည်ဖြည့်စည်းရေးသားပေးသူကတော့ ကို Min Thike ဖြစ်ပါတယ် ။
Djjoe man November 15, 2013 at 5:46 PM
SM 9005 အကိုဆီမှာ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ မြန်မာစာစနစ်ရပြီ မြန်မာကီးဘုတ်မပေါ်လာဘူးဆိုရင်
ခုပို့စ်က ဇစ်ဖိုင်လေးကို ညွှန်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားထည့်ပေးလိုက်ပါ :)
maung zaw zaw February 14, 2014 at 7:32 AM
Galaxy Tab2"7.0" GT-P3100 Version 4.2.2 firmware လိုချင်​လို့ လင့်​​လေးတချက်​​လောက်​ကူညီပါ
Nyeinchan November 15, 2013 at 8:25 PM
အကိုရေ အကိုပြောသလို ကျွန်တော် s3 4.3 မှာလုပ်တာ အဆင်မပြေဘူး keyboard input language မှာတော. zawgyi ဆိုတာပေါ်တယ် ဒါပေမယ်. keyboard မှာတော. အတုံးအတုံးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာ
1)install root explore pro
2) http://my.pcloud.com/#page=publink&code=c00 s4 မှာပါတဲ့ မြန်မာ font file ပါ /system/fonts/ အောက်မှာ ထားပေးရပါမယ် ထည့်ပြီးရင် permission ချိန်းပေးဖို့လိုပါမယ် rw-r--r-o
3) အောက်ပါ xml file နှစ် file ကို /system/etc/ ထဲ overwrite ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ
ပြီးရင် restart goodluck
credit > Android_my_MM
Soe Min February 6, 2014 at 1:16 AM
thanksalots anonymous.
Anonymous February 17, 2014 at 1:28 AM
Only after Anonymous step2and3work for my s3 with andriod 4.3
Ryan David September 9, 2014 at 10:06 AM
ဒီlinkမှာမရှိ​တော့ဘူးအကိုရဲ့ (2) http://my.pcloud.com/#page=publink&code=c00 s4 မှာပါတဲ့ မြန်မာ font file
waiyan htetmyat November 29, 2013 at 2:23 AM
S3 I 9300 မှာ emoji အရုပ်တွေ မပေါ ဘူးဖြစ်နေပါသည်
ကျနော့်ရဲ့ ace3GT S7270L 4.2.2 မှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးမ္ဘာပါပဲခင်ဗျာ
note3SM-9005 မှာ root မလုပ် ဘဲမြန်မာစာမြင် ရမဲ့နည်းလေးရှိရင်ပြောပြ ပေးပါ ခင် ဗျာ။
ပြန်ရောင်းပြီး s4 ဝယ်လိုက်ဒါဆိုroot မလုပ်ဘဲမြန်မာစာမြင် ရမယ်
galaxy note 2, android 4.3 ???
zwe nyi December 23, 2013 at 3:56 AM
zwe nyi December 23, 2013 at 4:00 AM
galaxy note2ကို root မဖောက်ချင်လို့.... မဖောက်ဘဲ မြန်မာစာ ထည့်ရင် အဆင်ပြေမှာလေးး ပြောပေးပါလားးးး.... Android 4.3 ပါ.....
toy December 26, 2013 at 1:14 PM
ကူညီပါ အုံး sph l710မှာSystemထဲက >>> sipdb‌လေး မ‌တွေ.လို့တခြားက‌တော့အဆင်‌‌ပြေတယ်‌‌
toy December 26, 2013 at 3:15 PM
s3 4.3 sph l710 ပါ Keyboardအတွက်‌systemထဲကsipdb က မ‌တွေ့လို့ဘယ်‌လို လုပ်‌၇မလဲ
♫4htwe ♫ January 3, 2014 at 7:05 AM
အနော်တို့က တုံးတယ်ဗျ video လေးရိုက်ပြီးတော့ youtube မှာ တင်ပေးပါလား နိုင်ငံတကာ အဆင့်လဲ မှီသွားတာပေါ့ ............. အားလုံးဒေါင်းပြီးပြီ my ZW
ကြီးကို ဘယ်သွားပြီး ဘယ်လို ထည့်ရမှန်းကို မသိဘူးဖြစ်နေတယ် ရွာလည်နေပြီ :(
kyan taing aung January 13, 2014 at 7:49 PM
NOTE 3:SM N900 ကတော့ အကိုပြောတဲ့ အတိုင်လုပ်လိုက်တာ တခါထဲ ဖုန်းပါပျက်သွားတယ် ဗျာ
pee stone January 29, 2014 at 10:19 PM
note 8.0 n5100 4.1.2 ကိုရောလုပ်လို့ရလားခင်ဗျ....
mon tayok January 31, 2014 at 1:56 AM
note24.3 အတွက်ကူညီပါအုံး
komg komglay February 12, 2014 at 7:00 AM
အကို အဆင်မပြေဘူး my zw ကိုထည့်ဒါအဆင်မပြေဘူးပြောပြပေပါအုံး
maung zaw zaw February 14, 2014 at 7:29 AM
Galaxy Tab2"7.0" GT-P3100 Version 4.2.2 ဖန်​ဝဲလိုချင်​ပါတယ်​ လင်​​လေးတချက်​​လောက်​
Little Romeio February 18, 2014 at 1:14 AM
root မလုပ်ထားတဲ့ S3(android4.3) အတွက်ရောနည်းလမ်းမရှိဘူးလားခင်ဗျာ
Myo Thet February 22, 2014 at 2:02 AM
ကျေးဇူးပါ Note3SM-9005 အဆင်ပြေသွားပြီး
အောက်က Anonymous ပြောတဲ့နည်းလဲ သုံးမှရတယ်။
AnonymousNovember 22, 2013 at 12:37 AM
Ryan David September 9, 2014 at 10:05 AM
Galaxy win version 4.1.2 မှာလဲအဆင်ပြေပါတယ် ခုအဲ့ဒါလေးနဲ့ငြိမ့်နေပါတယ် ကျေးဇူးပါ........
naingwinthu March 11, 2014 at 11:04 PM
SM 9005 version 4.4.2 မှာလဲအဆင်ပြေလား အကို.....please ......နည်းလမ်းမရှိဘူးလားခင်ဗျာ ....
Anonymous March 22, 2014 at 2:57 AM
မိတ်ဆွေတို့ရေ ကျနော် Note2 ကို မ Root ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဟီး အဲဒါအလုပ်ပဲ မြန်မာစာရမဲ့နည်းလမ်းလေးမရှိကြဘူးလား Version 4.3 ဖြစ်သွားလို့
soemoe oo April 11, 2014 at 12:32 PM
Note24.3 ပါ သူများပို့တဲ့မြန်မာစာကိုဖတ်ရတယ်
ကိုယ်ပို့တဲ့မြန်မာစာက ဘယ်သူဆီမှာဖြစ်ဖြစ် ?????ပဲပေါ်ပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ please reply me .thanks
thaton tharlay July 25, 2014 at 2:43 AM
အကို အနော် S3 V 4.3 ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးပြီ ကီးဘုတ် ဘယ် ညာ ပွတ်တတာမပြောင်းဘူး ကူညီပေးပါ
Ryan David September 9, 2014 at 8:15 AM
waiyan December 16, 2014 at 11:30 AM
ကျွန်တော်ကS4 ပါ စာရှိက် ကတာ တွေအဆင် မပြေလို့ပါ Samsung keyboard ထဲမှာ မြန်မာစာသွင်းလို့မရ ဘူး ဖြစ် နေ တယ်